AC Milan oo maamulka Milano kala shirtay garoon ay u baahan tahay – Gool FM
AC Milan oo maamulka Milano kala shirtay garoon ay u baahan tahay
Raage November 30, 2017
(Milano) 30 Nof 2017 – Marco Fassone ayaa maalin dhowayd shaaca ka qaaday inay AC Milan doonayso inay la wareegto garoonka San Siro ama ay dhisato garoon iyada u gaar ah.
Haddaba haatan weriyaha caanka ah ee oo uu soo xigtey Mauro Suma ayaa Milan TV uga warramay kulan galabta dhexmaray wefdi uu dirtay maamulka Rossoneri oo uu hoggaaminayo Alessandro Sorbone iyo ninka dowladda hoose ee MILANO ugu qaybsan magaalaynta ee Pierfrancesco Maran.
Milan ayaa doonaysa inay heshiis maamulka magaalada kala gaarto San Siro ama ay raadsato garoon iyada u gaar ah, waxaana la sheegayaa inuu maamulku danaynayo inay Milan garoon cusub ka dhisato aagga Koonfur Galbeed ee magaalada.
Wuxuu weriyuhu sheegay inuu wada hadalkani ku dhacay jawi wanaagsan, balse lama oga waxa la isla meel dhigay, waxaana sidoo kale kulankan isha ku haysa Inter oo iyadna u toog haysa tillaabada ay Milan qaaddo.
Kooxaha Talyaaniga ayaa haatan wada kacaan ay ku dhisanayaan garoomo ay iyagu leeyihiin, maaddaama ay taasi muhim u tahay dakhliga ay kooxuhu aadka ugu baahan yihiin sidoo kalena qayb ka qaadan karta casriyaynta ku socota kubadda Talyaaniga.
SSC NAPOLI VS JUVENTUS: Dybala oo 9 beenaad ah & shaxda ay labada kooxi kusoo geli karaan!
XOG: Kostas Manolas oo qandaraaska u kordhiyay AS Roma